वैवाहिक बलात्कारको मुद्धा लाग्ने - Worldnews.com
वैवाहिक बलात्कारको मुद्धा लाग्ने
भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार पुरुषहरूले उमेर नपुगेका आफ्ना पत्नीसँग यौन सम्पर्क राख्न पाउने अनुमतिमा कानुनी सर्त अघिसारेको छ। भारतको प्रचलित कानुनको बलात्कारसम्बन्धी कानुनको एक अंशका रूपमा रहेको सो सर्तअनुसार १५ वर्षभन्दा माथिका पत्नीसँग मात्र लोग्नेले यौन सम्पर्क राख्न पाउने बताइएको छ।
-बालकृष्ण मैनाली देश संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ । एक वर्षअगाडि निक्र्योल गरिसकेको मुलुकी अपराध (संहिता) र मुलुकी देवानी (संहिता) गएको भदौ १ गतेदेखि लागू भएका छन् ।...
News of Nepal 2018-09-17
-कमलप्रसाद इटनी अपराध कानुनअनुसार समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिका आचरण र गतिविधिहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले कानुनको निर्माण गरेको हुन्छ । राज्यले निर्माण गरेको...
नाबालक श्रीमतिसंगको यौनसम्बन्ध बलात्कार
भारतमा श्रीमानलाई आफ्नो नाबालक श्रीमतिसंग यौनसम्बन्ध राख्‍न अनुमति दिने एउटा कानुनी प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। बलात्कार सम्बन्धी कानुनको एक भागका रुपमा...
याैन सम्पर्क गर्न अब १८ वर्ष पुग्नैपर्ने !
एजेन्सी । भारताको सर्वाेच्च अदालतले १५ देखि १८ वर्षकी पत्नीसँग सेक्स गर्नुलाई अपराधको संज्ञा दिएको छ । सर्वाेच्चले बुधबार बलात्कार गर्नु कानुनी अपराध र यो संविधानविपरीत...
-बालकृष्ण मैनाली केही समययता बालिका बलात्कार, अपहरण र हत्याको सिलसिला देशमा भयावहरुपमा देखा पर्न थालेको छ । अबोध बालिकाहरु बलात्कार, अपहरण र हत्याका सिकार बनिरहेका छन् । यस...
News of Nepal 2018-09-05
प्रशान्त वली, काठमाडौं घटना नम्बर १ पर्वतमा १६ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परिन्। छमर्केमा मेला भर्न गएकी किशोरीलाई लिफ्ट दिने नाममा होटलमा पु¥याएको र मदिरा पिलाएर...
प्रशान्त वली, काठमाडौं घटना नम्बर १ पर्वतमा १६ वर्षीया किशोरी सामूहिक बलात्कारमा परिन्। छमर्केमा मेला भर्न गएकी किशोरीलाई लिफ्ट दिने नाममा होटलमा पु¥याएको र मदिरा पिलाएर बलात्कार गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। सँगै रहेकी किशोरीले भागेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटनामा संलग्न ३ जना पक्राउ परेका छन्। घटना नम्बर २ ललितपुर प्युटारकी एक ७ वर्षीया बालिकामाथि सोही ठाउँका २४ वर्षीय...
भारतको दिल्लीकी एक २३ वर्षिया विद्यार्थीको बलात्कार र हत्या भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। तर के भारत अहिले पनि महिलाका लागि सुरक्षित स्थल बनेको छ त? १६ डिसेम्बर २०१२ मा एक युवती र उनका पुरुष साथी रातको ९ बजे लगत्तै बस चढेका थिए। त्यसपछि उनलाई चालक र बसमा रहेका अन्य पाँच पुरुषले बलात्कार गरे। उनीहरुले ती युवतीका पुरुष साथीलाई नराम्ररी कुटे। उनीहरुलाई मरणासन्न हुने गरी नग्न र रगताम्मे...
भारत: बलात्कारका घटनामा किन कमी आउँदैन?
भारतमा प्रहरीले परिचय खुल्न नसकेकी एउटी बालिकाका बलात्कारीहरूलाई खोजिरहेका छन्। पीडित बालिकाको न अनुहार चिन्न सकिने अवस्थामा छ, न उनको नाम थाहा वा ठेगाना नै। ती बालिका नौदेखि ११ वर्ष उमेरकी हुन सक्छिन्। उनको क्षतविक्षत शव पश्चिम गुजरातको सुरतमा फेला परेको थियो। विश्वभर डायमन्ड सिटी भनेर चिनिने उक्त नगरको एउटा खेल मैदाननजिकै रहेको झाडीमा उनको शव भेटिएको हो। उनको शरीरमा ८६ वटा...
देशघातक, भ्रष्टाचारी-बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको प्रावधान हुनुपर्छ
“कंचनपुर (कास) भीमदत्त २ उल्टा खामकी निर्मला पन्तको वलात्कार पछि हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सहितले प्रमाण मेटाउन लागेको स्थानीयले आशंका गरेका छन् । घटनास्थलमा शवसँगै भेटिएको निर्मलाको सुरुवाल प्रहरीले नै धोएर निचोरेको, घटनास्थलको सुरक्षा नगरेको, निर्मला पढ्न गएको वम परिवारको आंगनको अम्बाको रुख काटिएको र घर भित्र रंगरोगन गरिएको विषय शंकास्पद रहेको उनीहरु बताउँछन् ।”...
पछिल्लो समय नेपाली समाज कति भयावह बन्दैछ भन्ने उदाहरण एक होइन अनेक छन् । मूलत: बालिका बलात्कारका घटनाहरुको आँकडा केलाउँदा जो कोहीको मथिंगल रन्थनाउन पुग्छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यापछि बलात्कारका घटनाहरु केलाउने प्रयास भैरहेको छ । प्रहरीसम्म नपुगेका घटनाहरु कति छन् यत्तो छैन । प्रहरीमा उजुरी पुगेका बलात्कारका घटनाहरु कहालिलाग्दो छ । पाँच वर्षमा एक हजार...